Dastuur lagu dhaqmaa, Dowlad lagu dhisaa, Dalna lagu dejaa - by C/raxiin Hilowle Galayr | KEYDMEDIA ONLINE
Dastuur lagu dhaqmaa, Dowlad lagu dhisaa, Dalna lagu dejaa - by C/raxiin Hilowle Galayr
Cabdiraxiin Hilowle Galayr - Waxaa inta badan aad moodaa in mudooyinkaan Umada Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen in aan marnaba Dowlad iyo Midnimo iyo Nidaam Toona imaan karin inaan Nabad la hirgelin karin haba yaraatee wax kala danbayn ahna la helaynin ilaa Dalku ka yeesho Dastuur iyo Sharci iyo garsoor ma'ahee.
Hadaba Dastuurka hadda la Qorayaa ee qabyada muxuu kaga bedelan yahay kan hada noo Qoran ee axdi qarameedka ku meelgaadhka ah 71-ka Qodob iyo lifaaqyada la socda miyaa lagu dhaqay dadkaan Soomaaliyeed mise wax kale ayaa lagu dhaqaa?
Dastuurka Umad leedahay waa lagama maarmaan, waxaana laga helayaa wax walba. Tusaale ahaan hadaan soo qaadano waqtigii hore Umadeenu waxay lahayd Dastuur ay ku dhaqmaan waxaana loo yaqaanay (Xeer jajab) xeer jajabkaas Umada Soomaaliyeed haddaan dib ugu noqono wax waliba waxay lahaayeen xad iyo xeer xitaa qodob kasta oo ka mida xeer jababkaas.
Ninkii jebiyaa waxuu la kulmayay (Ciqaab, ganaax , xaal ama xil iwm) iyada oo aan lagu xadgudbayn waxii lagu heshiiyay lagana dhimayn lagaba badinayn waxaa kaaga sii daran ma ahayn wax qoran oo buug laga eegayo oo qodoba tirooyin iyo cadadyo ku suntan kala duwana ee dhamaantood inta geed hoostii lagu sameeyay ayaa nin waliba maskaxda ku haystay lamana jebinayn.
Waa in dib loogu noqdaa 1960kii 8 Gobol ee xaqa ahayd , Cadaaladana ku salaysnayd Lixdii Gobol ee Koonfurta Bariga iyo Bartamaha ahayd iyo Labadii Waqooyiga haddii aan halkaas xal laga dayin waxaa iman doonta ismaandhaaf xuduud dhuleed iyo in dadka soomaaliyeed kala fogaado gebi ahaan.
Waxaa lagaga hortagi karaa dhismaha Goladii hore ee sideeda ahaa in dib loogu noqdo si looga badbaado burbur qolyaha gudiyada Dastuurkana waxaan kula talin lahaa wadankan waxuu u burburay cadaalad daro ee dib dalka hawgu celinina waxaad qortaan waxaa ka danbaysa codeyn (Haa iyo Maya) afti la qaadi doonee taariikhda ayaa idin xusi doonta ama idin xidhi doonta.
Maamulgoboleedyada jira ee xaqdarada lagu aqoonsaday iyo kuwa leh hanala aqoonsadoba waa inay dowlada ku meelgaadhka ah wax ka bedeshaa oo dastuurka cusubna lagu saleeyaa sida ku xusan axdiqarameedka. In dastuurka ay garab socoto tirakoob iyo in afti laga qaado shacabka oo aan la afduubin shaqsi kasta oo soomaaliya dal iyo dibadna loo codeeyo dastuurkani mana anfacaa mise nama anfaco qof walibana rabitaankiisa ku codeeyo .
Waxaan qoraalkayga ku soo afjarayaa dastuur lagu dhaqmaa , dowlad lagu dhisaa!!!
La soco Qoraalkan oo yeelan doona qaybo badan...
QORAAGA AYEY U GAAR TAHAY MAQAALKAAN.